८ करोड लागतको महाशिला क्याम्पस भवन ४ वर्ष देखी अलपत्र, रकम हिनामिनाको आशंका ! – ebaglung.com
८ करोड लागतको महाशिला क्याम्पस भवन ४ वर्ष देखी अलपत्र, रकम हिनामिनाको आशंका !
२०७४ जेष्ठ १७, बुधबार ११:२४	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
माधब पराजुली, पर्वत, २०७४ जेठ १७ । २०७० सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले शिलान्यास गरेको लुंखु देउराली हाल महाशिला गाउँपालिका स्थित धुवाकोट महाशिला बहुमुखी क्याम्पसको भवन चारवर्ष देखी अलपत्र छ । थप अध्ययनको बिद्यार्थीहरु देशका बिभिन्न शहरमा जानुपर्ने समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँमै फुटबल, बास्केट बल ग्राउन्ड, होस्टेल सहितको सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी स्नातकतह सञ्चालन गर्नको लागी ३ तले १८ कोठे सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माणको कार्य शुरुवात गरिएको थियो । तर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री यादवले भवनको शिलान्यास गरेयता ३ ओटा सरकार गठन भए तर भवन अझै बन्न सकेको छैन ।
स्मरणरहोस, रु ८ करोड रकम लाग्ने स्टिमेट तयार गरि ३ बर्षमा सम्पुर्ण कार्य सकिसक्ने लक्ष्य थियो । भवन निर्माणका लागी स्थानिय तथा देशबिदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट चन्दा स्वरुप ८५ लाख रकम नगद उठाइएको थियो भने जिबिस पर्वत बाट ५० लाख र सांसद विकास कोष बाट ५ लाख रकम बिनियोजन भएको थियो ।
त्यो रकम कहाँ छ र केमा खर्चिएको छ हामीलाई केही थाहा छैन, स्थानिय याम बहादुर क्षेत्रीले भने काम्पस सन्चालका समिति मौन छ, भवन निर्माण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । राजनितिक खिचातानी गरेका कारण उक्त समस्या उत्पन्न भएको क्षेत्रीको भनाईछ ।
भवन निर्माणको काम लामो समय अलपत्र पर्दा पनि सम्वन्धित निकाय मौन रहेका कारण समस्या आएको क्याम्पस प्रमुख खुम प्रसाद शर्माले बताउछन् । क्याम्पस सञ्चालक समिति मौन रहदाँ भवन निर्माणको लागी आवश्यक पर्ने आर्थीक रकम जुट्न नसकेको उनको भनाई छ ।
शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री यादबले शिक्षामा राजनीतिक रङ मिसाउन नहुने भाषण गर्दै उक्त क्याम्पसको भवन निर्माणका लागी आर्थिक समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर समेत गरेकी थिईन् ।
शिक्षा मन्त्री यादव सहित पर्वतका सभासदहरु, बिभिन्न राजनितिक दलका शिर्ष व्यक्तिहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जि.शि.अ. सहित बिभिन्न सघंसस्थाका प्रतिनिधीको उपस्थितीमा निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको क्याम्पसको भवन अहिले गौचरणमा परिणत भएको देख्दा कसैको चित्त बुझेको छैन ।
अहिले सो क्याम्पसमा ६० जना भन्दा बढी बिद्यार्थी अध्ययरत छन । उनीहरुलाई भवन अभावका कारण महेन्द्रोदय ज्योति मा.बि.को भवनमा पठनपाठन गराईएको छ । भवन निमार्णमा ढिलाइ भएपछि बिद्यार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जनजीवराज सुशिला माध्यमिक बिद्यालयको बार्षिकोत्सव कार्यक्रम सुरु
योग तपस्या शिविर : विश्व शान्तिका लागि मानव समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण – हेमन्त